Tag: su'aalo | Martech Zone
10 Xayeysiinta Mawduucyadu Kuma Qanci Karaan Inay Dayacaan
Talaado, Agoosto 9, 2016 Khamiis, Agoosto 11, 2016 Michael Korsunsky
MGID, waxaan ku aragnaa kumanaan xayeysiis ah waxaanan u adeegnaa malaayiin ka badan bil kasta. Waxaan la soconaa waxqabadka xayeysiis kasta oo aan u adeegno oo aan la shaqeyno xayeysiistayaasha iyo daabacayaasha si aan u hagaajino farriimaha. Haa, waxaan leenahay qarsoodi aan la wadaagno kaliya macaamiisha. Laakiin, sidoo kale waxaa jira isbeddello sawirro waaweyn ah oo aan dooneyno inaan la wadaagno qof walba oo xiiseynaya xayeysiinta waxqabadka asaliga ah, waxaan rajeyneynaa inaan ka faa'iideysanno dhammaan warshadaha. Waa kuwan 10 isbeddellada muhiimka ah ee jira